सन्दिपजंग शाह नेपालगन्ज - शुक्रबार, भदौ १२, २०७७
समाजले कैदीलाई हेर्ने नजर पक्कै फरक छ। हुने पनि भयो, अपराध गरेर कैदी भएका हुन्छन् नि!
तर, अपराधै नगरेर कैदी जीवन बिताउनेहरूका पीडा यो समाजले कहिल्यै बुझ्दैन।
अहिले कोरोनाले कैदी र अरू मानिस सबैलाई एउटै देख्यो। म त भन्छु कोरोनाले झैं कानुनले पनि सबैलाई समान व्यवहार गरोस्। त्यसैले म संक्रमित हुँदा यो कोरोना भाइरसलाई धन्यवाद दिएको छु। कमसेकम समान व्यवहार त भयो।
न्यायालयबाट न्याय पाउनेछु भन्ने विश्वास छ। कानुनका धाराहरू बग्दै मसँग आइपुगे, दफा र उपदफा लिएर।
अनि म २०७६ कात्तिक १४ गतेदेखि कानुनको परिबन्धनमा छु। कात्तिक २८ गते जेल चलान भएको कैदी हुँ। अहिले फेरि कोरोना संक्रमित भएर निको भएको कैदी।
कैदीप्रति समाजको मनोविज्ञान बडो गजबको देखेँ, कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय प्रहरी प्रमुख तीनजना चिफ सा'पहरु पनि जेल त जानुभयो नि। तर, यही समाजका मान्छेले उहाँहरूमध्ये कतिपयलाई जेलबाट फर्किंदा खादा र फूलमाला अबिरले स्वागत गरेका थिए।
समाजको मनोविज्ञान हजुर!
नेपालगन्ज मेरो थातथलो हो। राजनीति सेवाभावले सुरु गरेँ। सायद, त्यही नै मेरो जेल यात्राको सुरुवाती खुड्किलो थियो। व्यवसाय राम्रै ठिकठाकै चलिरहेको थियो। जिल्लामा हुने राजनीतिक गतिविधिमा एउटा दलको सक्रिय कार्यकर्ता हुँ।
मलाई थाहा छैन म आवद्ध भएको पार्टीले अहिले मलाई कुन नजरमा हेर्छ, पदीय जिम्मेवारीमा रहेको म पार्टीको सिपाही हो। तर, कतिपयलाई त्यो नै सह्य थिएन, सायद। मानिस हुँ कहिलेकाहीँ त्रुटि वा गल्ती भइहाल्छ।
दूधले नुहाएको त को पो छ र समाजमा!
तर, अपराध नै त गरेको थिइनँ। पटक-पटक ममाथि राजनीतिक पूर्वाग्रहसहित गलत साबित गर्ने प्रयास भइरहेका थिए। म संयमित हुँदै जोगिएको थिएँ। पछिल्लोपटक 'हाइ लेभलको' अभ्यास गरियो। त्यो प्रपञ्चबाट म उम्किन सकिनँ, त्यही मेरो अपराध भयो।
तर, मैले कानुनको खिलाप हुनेगरी केही अपराध गरेको छैन।
यही साउन २० गते मलाई कोभिड-१९ संक्रमण पुष्टि भयो। म १४ दिन बाँकेकै खजुरामा रहेको आइसेलेसनमा बसेर निको भएँ। र, फेरि जेल फर्केको कैदी हुँ।
नेपालगन्जको कारागारमा ७ सयभन्दा बढी कैदी छा। एउटै कोठामा १५-१६ जना बस्छौं। १० जनाभन्दा बढी संक्रमित भइसक्यौं, अब भन्नुस् कसरी भौतिक दूरी कायम गरौं?
सामाजिक दूरीबाट त हामी टाढै छौं। भाइरसको संक्रमणबाट त जोगिएलान् मानिसहरू तर राजनीतिक संक्रमणबाट मजस्ता युवा कसरी जोगिने? चिन्ता यो विषयको छ।
प्रपञ्च र परिस्थितिले म अपराधीको दर्जा बोकेर दर्ज्यानी चिह्नसहित जेलमा छु। कानुन र न्यायको मेरो लडाइँ त लड्दै छु। समाज संक्रमणको लडाइँ कसले लड्ने होलान्?
(कैदी शाहसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)